Ukuphupha Ngokufa Ngokwako | ukuDubula, ukutshona kunye nokubaleka ngaphezulu
kuqala » Amaphupha » Phupha ngokufa kwakho
Phupha ngokufa kwakho ngaphandle kwamathandabuzo yinto eyoyikisayo eshiya nabani na engazi ukuba acinge ntoni na.
Amaphupha ahlala esizisela imiyalezo evela kwi-subconscious yethu.
Xa silala, sivumela i-subconscious yethu ukuba ithumele imiyalezo kuthi ngamaphupha. Kuqheleke kakhulu ukuba ekuvukeni, ukufuna ukwazi malunga nentsingiselo enokwenzeka yephupha lethu ngobusuku obungaphambili bukhulu. Kwaye impembelelo yokuqala kukukhangela iintsingiselo kubo.
Ukuba uphuphe ngokufa kwakho, awudingi ukwesaba okanye ukwesaba ukuba uya kufa: okokuqala qonda ukuba eli phupha lizama ukukubonisa ntoni.
Eli phupha lifanekisela utshintsho, utshintsho, izinto ezifunyenweyo kunye nenguquko eyenzekayo engqondweni yakho nakubomi bakho.
Nangona eli phupha linokubangela iimvakalelo zoloyiko, ukuphakuzela kunye nokuxhalaba, akukho mfuneko ye-alarm njengoko ihlala ithathwa njengophawu oluhle.
Kusenokuthetha ukuba zikho utshintsho olukhulu oluza kwenzeka ebomini bakho nakwindlela yakho. Uhamba nesiqalo esitsha kwaye kuya kufuneka ushiye ixesha elidlulileyo ngasemva.
Olu tshintsho luya kuba ngcono. Kungenzeka ukuba kufuneka "ubulale" imikhwa emidala, ukunika ithuba lokuba izinto ezintsha zize ebomini bakho. Ukufa akunyanzelekanga ukuba ibe sisiphelo sobomi, kodwa sisiphelo somjikelo, ukuze kuvele imijikelo emitsha.
Olu hlobo lwephupha luxhaphake kakhulu xa eneneni unesifo esibi kakhulu okanye esibi kakhulu, njengoko sisimboli nje sokungazi kwakho sikubonisa inkxalabo malunga nempilo yakho. Musa ukuphaphazela.
Kuthetha ukuthini ukuphupha ngokufa kwakho?
Ngapha koko, lithetha ukuthini kanye kanye eli phupha?
Ngaba intsingiselo yalo isoloko ifana okanye iyahluka kumntu nomntu?
Inyaniso kukuba intsingiselo yamaphupha iyahluka kumntu nomntu, oku kungenxa yokuba iphupha ngalinye lahlukile.
Ukuze uqonde ngcono, jonga nje ukuba ukuphupha ngokufa kwakho ngokudubula yinto eyahlukileyo kunokurhaxwa, uyazi?
Iphupha ngalinye lahlukile kwaye ngalinye linentsingiselo yalo kunye nomyalezo walo ekufuneka ligqithise, kodwa ungakhathazeki!
Sishiya ngezantsi zonke iintsingiselo ezahlukeneyo ezinokubakho amaphupha akho.
Zihlalutye nje zonke kwaye ubone ukuba yeyiphi ehambelana nephupha lakho kakhulu.
Phupha ngokuzidubula ufe
Ukuphupha ngokufa kwakho okubangelwa zizithonga zompu ngokuqinisekileyo yindlela embi yokuvuka. Ukuba uhlala kwisixeko esinobundlobongela, ke eli liphupha eliya kubangela ukwesaba ngakumbi.
Ngaphambi kokuba ukhathazeke kwaye ucinge ukuba iphupha lisisandulela, yazi ukuba iintsingiselo zalo azibi kangako.
Ukuphupha udutyulwe wafa kungabonisa oko wenza ngokungxama kakhulu okanye ngobundlongondlongo malunga nezigqibo zobomi bakho. Hlalutya indlela owenze ngayo mva nje.
Zama ukuzola kwaye ungangxami kangako emsebenzini nakwimeko yekhaya lakho.
Ukuphupha ngokufa ngezithonga zemipu kukwabonisa ukuba utshintsho olukhawulezileyo luya kwenzeka ebomini bakho. Ukuba ukwi-rut, loo nto iya kutshintsha ngokukhawuleza.
Umbono wokudubula yinto ebonakala ingalindelekanga kwaye ngokukhawuleza kwaye itshintshe ngokupheleleyo ubomi bakho. Isenokuba sisindululo esitsha somsebenzi, ubudlelwane obutsha, ukufuduka kwendlu, okanye uhambo olungalindelekanga.
Ukuba ephupheni uvele weva ukudubula kwaye akazange abone ukuba ngubani ojongene nokudubula, oku kubonisa ukuba ujikeleze kwaye kufuneka ubeke ingqalelo ngakumbi kubudlelwane bakho, nokuba ngaba ubuhlobo, ukuthandana okanye umsebenzi.
Ukuba ukufa kwakho kubangelwe kukudubula njengoko ubuphakathi kokudubula, ke eli phupha linokuthetha ukuba ubandakanyeka kubuqhetseba kunye nokunyundela.
Umntu uzama ukukubeka kwimeko yongquzulwano nabanye abantu, ukutshisa umfanekiso wakho. Kulumkele ukwabelana ngobomi bakho nabanye abantu. Camngca ukuba ngowuphi umntu osondeleyo kuwe onokuthi ujongele phantsi umfanekiso wakho.
Phupha ngokufa ngokutshona
Ambalwa amaphupha awoyikeka njengokuphupha ngokufa kwakho, ngakumbi ukuba unobangela ibikukurhaxwa. Ukuba uphuphe ukuba urhaxwe ngamanzi kwaye wavuka ngokuphakuzela, yazi ukuba akukho sizathu sokukhathazeka. Olu hlobo lwephupha lunokuchazwa ngeendlela ezininzi.
Ukuba awuyazi indlela yokuqubha okanye ukoyika ukuqubha, ukuphupha ngokufa ngokutshona kunokumela uloyiko lwakho. Kuqheleke kakhulu ukuphupha ngeemeko ezisoyikisayo kwaye sisoyika, kuba ingqondo yethu ihlala isebenza nangona silele. Ukuba uloyiko lokurhaxwa ayisiyiyo imeko yakho, qonda ezinye iindlela zokutolika ezingezantsi.
Amanzi ngokubanzi afuzisela iimvakalelo. Ukurhaxwa kubonisa ukuba zonke iimvakalelo zakho ziyakucinezela ukuya kwinqanaba "lokubulala" ngaphakathi.
Uziva ulawulwa ziimvakalelo ongenakukwazi ukuzichaza kwaye ungaziqondi, ezinokuthi: uthando, ulangazelelo, ukungazithembi, ixhala kunye noloyiko. ukwi umzabalazo wemihla ngemihla nobuntu bakho kunye nobuntu bakho. Isenokuba lixesha elihle lokucamngca nokucamngca.
Kwakhona, ukuphupha ubhubhile ngokutshona kusenokuba sisihlabo esihle. Kukho amathuba okuba ufikelele usukelo lwakho olunqwenela kakhulu. Ukuba unemiba yezomthetho, iya kusonjululwa endaweni yakho.
Thatha ixesha lokukhupha izicwangciso ephepheni kwaye uzisebenzise.
Phupha ngokufa ngokugilwa yimoto
Ukuba uphuphe ngokufa kwakho ngokutshayiswa yimoto, yazi ukuba iphupha lakho linokuba neentsingiselo ezininzi.
Musa ukoyika ukucinga ukuba eli phupha lisandulela kwaye enye imoto iya kugijima phezu kwakho, kuba amaphupha malunga neengozi zemoto ngokuqhelekileyo luphawu lokuchuma kwemali.
Okukhona isikhulu inqwelo ekukubethayo, kokukhona sifumana inzuzo yemali. Ukuba umntu oqhuba imoto ibingumntu omaziyo, isenokuba yiyo loo nto lo mntu uya kukunceda ngemali.
Kwakhona, eli lixesha elihle lokwenza utyalo-mali, ucele ukunyuselwa umvuzo emsebenzini wakho, okanye ufumane imali eyongezelelweyo.
Olunye utoliko olunokwenzeka lokuphupha ngokufa kwakho ngokubethwa yimoto kukuba kuya kufuneka ujongane noloyiko lwakho kunye nokungakhuseleki kwakho ukuze ujabulele inzuzo kunye nemivuzo yexesha elizayo. Okwangoku uneengxabano zangaphakathi ezikuthintela ekufezekiseni iinzuzo ebomini bakho.
Eli lixesha lokukhulula nakuphi na ukungakhuseleki okuhlala ngaphakathi kuwe. Yenza indawo entsha yokungena ebomini bakho kwaye ubone ukuba kungekudala uza kufezekisa yonke into oyifunayo.
Ngaba eli phupha lithetha into eyahlukileyo?
Abantu abaninzi banamaphupha ahluke ngokupheleleyo kunalawo achazwe kumanqaku kwaye oku kuqhelekile.
Kule meko, ukuba uphuphe into ekhankanywe kwinqaku, unokuqiniseka ukuba kunokwenzeka ukuba le ntsingiselo.
Ukuba uye waba nolunye uhlobo lwephupha, olwahlukileyo kulawo achazwe apha, kusenokwenzeka ukuba lithetha enye into.
Ukuba kunjalo, shiya nje inkcazo encinci kweli nqaku ukuze sidibanise iphupha lakho kunye nentsingiselo yalo ngokukhawuleza.
phupha ngengozi yemoto
Umele ukuba sele uyiqaphele loo nto ukuphupha ngokufa kwakho kunokuba kuhle okanye kubi, yonke into iya kuxhomekeka kwimeko yephupha lakho.
Ungaze ulibale ukuba iphupha ngalinye lahlukile, ke zama ukuwahlalutya onke ngokweenkcukacha njengoko asenokuzama ukudlulisa imiyalezo ebalulekileyo kubomi bakho.
Yiba namaphupha amahle! 🙂
1 Kuthetha ukuthini ukuphupha ngokufa kwakho?
1.1 Phupha ngokuzidubula ufe
1.2 Phupha ngokufa ngokutshona
1.3 Phupha ngokufa ngokugilwa yimoto
2 Ngaba eli phupha lithetha into eyahlukileyo?
NgoDisemba 21, 2018, 12: 17 pm
Ndiphuphe indoda indityumza ngodonga lwemoto ngabom
Ngomhla wama-21 kuMatshi 2019, 11: 00 am
Molo, ndiphuphe ndisentabeni nabazala ababini endingazange ndibabone kwiminyaka, enyanisweni asizange sidibane kakuhle ebuntwaneni. Kuthe kusenjalo kwabakho isaqhwithi somoya kunye nokudilika komhlaba, ndithe ndisehla ndabona umama nabantwana bam besengozini. Kwaye ndaziva ngathi ndifile kunye nabazala bam. Umnqa kukuba ndaya ngqo kwiindawo endihlala kuzo ubomi bam bonke. Ndandibabona ngamanye amaxesha.